Mpanjifa maro no hanontany hoe isaky ny inona no manolo ny kojakojam-pirinty rehefa mividy azy? Toa avo be ny sain'ny mpampiasa an'io olana io. Androany, amin'ity fotoana ity dia tiako hovaliana amin'ny antsipiriany ireo fanontaniana ireo ho anao. Fakafakao tsara, kojakoja fanaovan-gazety ...
Ny fampiasana menaka 1. Mihinana. Iray amin'ireo otrikaina telo lehibe (gliosida, proteinina ary menaka) tsy tokony hananan'ny vatan'olombelona izany. Ny fanjifana dia iray amin'ireo famantarana ny fari-piainana. Mba hanomezana asidra matavy tena ilaina, vitamina mety levona ao anaty tavy ary ny otrikaina azo tsoahina amin'ny vitamina, ny angovo, manatsara ny ...
Misy fomba maro isan-karazany hahazoana menaka legioma. Ohatra, fomba fanodinana visy ara-batana, fomba fanaovan-gazety hydraulic, fomba fitrandrahana solvent sns. Ny fomba fanodinam-batana ara-batana dia misy fanaovan-gazety indray mandeha sy fanindriana indroa, fanodinana mafana ary fanindriana mangatsiaka. Fantatrao ve ny mahasamihafa azy ...
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Masinina fanaovan-gazety solika, Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Masinina fanaovan-gazety menaka kely, Mpanondraka solika voa, Mpanondraka solika, Gazety Oliva Oliva,